Inuu kiiska ku fooraray Valbuena, in Benzema uu la kulmi karo xarig 10 bilood ah, xilliga ay maxkamadda dib u dhigtay ku dhawaaqidda go’aanka iyo waxyaabihii kasoo kordhay kiiskii muuqaal xun duubista ee laacibka Real Madrid lagu heystay – Gool FM
(France) 23 Okt 2021. Laacibka kooxda Real Madrid ee Karim Benzema ayaa waji kara xabsi 10 bilood ah iyo ganaax lacageed oo gaaraya 75 kun oo euro haddii ay guuleystaan qareennada Mathieu Valbuena kuwaasoo Benzema ku heysta inuu muuqaal galmo ah ka duubay saaxiibkiisa isla markaana uu ku rikaateeyay.
Maalintii Jimcaha, maxkamadda ayaa go’aansatay inay ku dhowaaqidda go’aankeeda dib u dhigtay illaa iyo bisha soo aaddan ee November 24-keeda markaas laacibka Los Blancos la xukmi doono.
Xukunka maxkamadda ayaa lagu dhawaaqi doonaa taariikhdaas iyadoo ay maxkamaddu dib u dhigta go’aankeeda xilli ay dhageysatay dacwadaha labada dhinac saddex jeer.
Naadiga Real Madrid ayaa kooxda Sheriff Tiraspol la ciyaari doonta tartanka Champions League kulan ka tirsan wareeggiisa guruubyada isla maalintaas.
Qareennada difaacaya Benzema ayaa ku doodaya inuu xiddigan beri ka yahay dambiga lagu soo eedeeyay iyagoo weeraray Valbuena.
“Valbuena waxa uu dhibbane u yahay ficilladiisa, taas waxaa caddeyneysa inuu muuqaalka galmada ah isaga iska duubay kaddibna isaga ayay ku rikaateeyeen,” ayuu ku dooday abuukatihii difaacayay kabtan sugaha naadiga ka ciyaarta La Liga.
“Lama duubin isagoo aanan ogeyn, isaga ayaa qaab ‘selfie’ ah isaga duubay, gabadha yar ma aysan ogeyn in la duubayo, duubista qof isagoo aanan ogeyn weliba galmo ku jira waa dambi axmaqnimo ah.
“Qof ka fikireysa malahan gabadhan, xitaa dambi-baareyaasha.
“Xilliyadii ugu horreeyay eedeyntan waxay ku doonayeen inay hoos u dhigaan xiddig, waana sababta ay marka hore warbaahinta ugu soo bandhigeen kahor sharciga.
“Benzema kaliya saddex jaalle ayuu qaatay xirfaddiisa, waxaana uu u ciyaaray kaliya labo naadiga, walina waxa uu canshuur ka bixiyaa Faransiiska.
“Shakhsiyaddiisa ayaanan ka dhigtay sida uu haatan yahay, ma ii sheegi kartaa sababta uu falkan oo kale u geysanayo” ayuu dooddiisa sii raaciyay abuukataha difaacaya Benzema ee Sylvian Cormier.
Si kastaba ha ahaatee, wargeyska MARCA oo daabacay sheekadan ma uusan soo qaadan doodad qareennada Valbuena, waxaase go’aanka maxkamadda la dhowri doonaa 24-ka bisha soo aaddan ee November.